Shirka Hoggaamiyeyaasha Wadamada G20 oo taageeray in tallaalka COVID-19 laga dhigo mid loo simanyahay – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Shirka Hoggaamiyeyaasha Wadamada G20 oo taageeray in tallaalka COVID-19 laga dhigo mid loo simanyahay
By Diirshe / November 22, 2020 November 22, 2020
Riyad (SONNA)- Hoggaamiyeyaasha 20-ka waddan ee ugu dhaqaalaha badan adduunka ayaa ballan-qaadaya Axadda maanta ah si loo hubiyo in si caddaalad ah loogu qaybiyo tallaallada COVID-19, dawooyinka iyo tijaabooyinka adduunka oo dhan, sida ku xusan war-murtiyeed qabyo ah oo ay soo saareen, si loogu taageero waddamada saboolka ah ee la daalaa dhacaya ka-soo-kabashada cudurka faafa ee coronavirus.
Cudurka faafa ee ‘COVID-19’, ayaa dhaqaalaha adduunka ku tuuray hoos u dhac aad u qoto dheer sannadkan iyadoo loo baahanyahay dadaalo dheeri ah si loo xoojiyo dib-u-soo-kabashada dhaqaale ee 2021, Arrinta ayaana ahayd kuwa ugu sarreeya ee ajandaha Shirkan.
“Wax dadaal ah ugama hari doonno sidii aan u hubin lahayn helitaankooda iyo sinnaanta ay u heli karaan dadka oo dhan, iyadoo la raacayo ballanqaadyada xubnaha ee dhiirrigelinta hal-abuurnimada,Waxaan aqoonsannahay doorka tallaalkan ballaaran inuu yahay wanaag guud oo caalami ah” ayay hoggaamiyeyaasha G20 ku sheegeen dukumintiga qabyada ah oo ay soo saareen islamarkaana Nuqul ka mid ah ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters.
Dhibaatooyinka mataanaha ah ee aafada iyo soo-kabashada aan la hubin ee caalamiga ah ayaa hareeyay maalintii ugu horreysay ee shirkan oo laba maalmood socday kaasoo uu guddoominayay Dalka Sacuudi Carabiya, Islamarkaana ku wareejinaya madaxtinimada G20 Dalka Talyaaniga bisha soo socota.
Boqorka Sacuudi Carabiya Salmaan Bin C/casiis ayaa sheegay “Waxaan ku rajo weynahay horumarka laga sameeyay horumarinta tallaalka, qalabka daaweynta iyo qalabka baaritaanka ee COVID-19, laakiin waa inaan ka shaqeynaa abuurista xaaladaha helitaanka qalabkan oo la awoodi karo oo loo siman yahay dhammaan dadka Dunida oo dhan ayuu ku yiri khudbadiisii ​​furitaanka shirka.
“Waxaa waajib nagu ah inaan kor u qaadno caqabadda si wada jir ah inta lagu guda jiro shir madaxeedkan oo aan farriin adag oo rajo iyo kalsooni siinno dadkeenna annaga oo qaadaneyna siyaasado lagu yareynayo dhibaatadan,” ayuu u sheegay hoggaamiyeyaasha adduunka.
Wasiirka Haweenka oo Daah furtay Ololaha 16 Maalin ee Ka Hor tagga Tacadiyadda Dumarka “Sawirro”
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo daah furay shir muhiim ah “SAIWRRO”
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya oo ku dhawaaqay weerar lagu qaadayo magaalado madaxda Gobolka Tigreega.
Faransiiska oo Soomaaliya ka cafiyay lacag dhan 306 milyan
Wasiirka Qorsheynta XFS oo kulan la qaatay xubno ka socday maamulka Puntland
Caalamka :Kiisaska COVID-19 oo gaaray 60 Milyan
Turki:Wasiirka Ganacsiga XFS oo ka qeyb-galay Bandhigga cunnooyinka caalamiga ah